Nitohy toy ny mahazatra ny fihaonan’ny vahoaka Malagasy tsy mankatoa ny fanonganam-panjakana teto amin’ny an-kianjan’ny Magro Behoririka androany. Andriamatoa Constant RAVELOSON dia nasiaka tamin’ny kabariny, hisy hetsika lehibe rahampitso Alarobia hoy izy koa manainga ny vahoaka rehetra hamonjy izany. Ady ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara no atao fa nobodoin’ny olona tokana ny fitantanana ny firenena hoy izy. Nambarany tamin’izany ihany koa fa matoa misy polisy politika (FIS) dia didin-jadona no manjaka eto. Araka izany, hoy ihany izy : ny filoha telolahy dia tsy maintsy manaraka ny dinika rehetra handaminana ny firenena.
Namaly ny fanambarana nataon’ny Gal Ranto sy Gal Dolin ary Raharinaivo Andrianatoandro ihany koa izy, soniavo izay tian’ialahy isany soniavina na managana Repoblika ivelan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny vakiroaka hoy Constant, tsy hamidinay amin’ny fitiavana ny Repoblika hoy ity Mpampianatra ny taranja Filozofia ity.
Auteur Solo RazafyPublié le 1 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Militaires, Négos, Politique
7 pensées sur “Ho faranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT !”
Misaotra anareo rehetra mpirai-tolona e!… Ho avy any izahay, ary hitaona ieo tapaka sy namana! Tsy maintsy ho voahilika io!
tena alefaso ny kamikazy fa tsy lasa intsony ity eh!
Mangataka aminareo namana frantsay,
Mety ve Kely gelena ?
Hamafiso hatrany ny firaisan-kina ary harindraina tsara ny hetsika fa tsy haharitra io HAT io.
Ry Gasy manana fianakaviana sy havana voahitsakitsak’ity Jiolahy,
Précédent Article précédent : Video – Constant Raveloson, Magro 01/03/2011
Suivant Article suivant : Questions ouvertes au GIC-M de la SADC et à toutes les chancelleries établies à Madagascar